Mapeji Kwavanopa Zvinhu Kune Vacheche Mahara - Aids
t nharembozha Gumiguru 2016
sei wont yangu foni kuchaja zvisina waya
zvekuita kana iphone yangu yaoma
foni yangu yakavhurwa asi hapana sevhisi
maitiro ekuvanza nhamba yefoni kana uchifona
Mapeji Kwavanopa Zvinhu Kune Vacheche
Mapeji umo ivo vanopa zvinhu zvevacheche. Mahara emwana zvekushandisa zvinogona kuponesa hupenyu hwako kana iwe uine nhumbu nemwana wako wekutanga kana kutogadzirira kugamuchira wako wechishanu! Vacheche vanoda zvinhu zvakawanda uye izvo zvinogona kudhura kwazvo. Kunyangwe hazvo bhajeti yako yakaoma kana iwe uchingoda kuyedza zvigadzirwa zvitsva uye uone zviri kunze uko, kusainira mahara zvekupa kwevana chinhu chinowanzo kufuratirwa sarudzo.
Mapeji epamhepo ekukubatsira iwe kutora vana masampula online
Cashbackbase inzvimbo inozivikanwa yekuviga zvipo zvakadzikiswa zvakanyanya uye zvigadzirwa.
Vatengesi vazhinji vanoshandisa Cashbackbase kuti vawedzere kutengesa kwavo nekuvandudza ma profiles, saka kune matani emikana yekutenga.
Kuti uwane zvemahara zvigadzirwa zvevana, ingo saina saiti (inokurumidza uye yemahara) uye kana iwe uchinge wamisa account yako, unogona kudzokera kune peji reimba kuti uone izvo zviripo zvinopihwa.
Mimwe mihombe yemamai zvigadzirwa pane ino saiti inosanganisira inowira yekufamba muhari iyo yemahara zvachose.
2. Amazon Baby Kunyoresa Service
YeAmazon Yevacheche Revhisi sevhisi inzira yakanaka yekutora vana zvakakosha uye unoshuvira zvinyorwa zvinhu zvemahara kana pakadzika dhisikaundi.
Iyo saiti yakagadzirirwa zvakanyanya vakadzi vane nhumbu kuti vagadzire runyorwa rwezvinodiwa kana zvinodiwa zvinhu zvekuuya kwemwana.
Kunyoresa kuri pachena uye kuri nyore, uye panguva yekunyoresa, vashandisi vanogona kusarudza kuti runyorwa ruzhinji kana kutumira chinongedzo kune vanogamuchira.
Kana yako account yapera, unogona kuwedzera zvinhu zvaunoda kuRegistry yako wozvigovana nevamwe vanhu vanogona kusarudza kukupa iwe chimwe kana zvimwe zvezvinhu zvacho.
Paunenge wapedza iyo rondedzero, Amazon inokutumira iwe inogamuchirwa bhokisi riine zvinhu zvevacheche zvinokosheswa kusvika kumadhora makumi maviri nemashanu. Uyezve, kutumira kwemahara uye kudzoka kunowanikwa pazvinhu zvakawanda.
Blogs kukuchengeta iwe uchivandudza pane emahara emwana sampuro mikana
3. Amai chipo ( freebiemom.com )
Freebie Amai imwe yekutengesa shopu yezvinhu zvese yemahara uye yakaderedzwa.
Iyo saiti inosanganisira maAmazon anopa, akakosha zvipo, anopa yekupa portal, uye echokwadi mapaipi.
Ingotinya paZvipo tebhu uye peta nepanowanika zvinopihwa (kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakatarwa, unogona kushandisa chishandiso chekutsvaga mukona yekumusoro kurudyi kwechiratidziri).
Wobva wadzvanya pane chaunoda chaunoda, panguva iyoyo unozokurudzirwa kuvhura account.
Kana yako account yavhurwa, iwo akasarudzwa makuponi uye zvinopihwa zvichawedzerwa kuaccount yako, zvakagadzirira kuti ushandise.
Sezviri nyore sezvazvinogona kurira, Yangu Yemahara Chigadzirwa Sampuli webhusaiti kune avo vanotsvaga makuru mahara zvigadzirwa.
Vashandisi vanogona kunyorera kune saiti kuti vagamuchire izvozvi zvipo. Email email dhizaini ichatumirwa kwauri zuva rega rega, ichiratidza izvo zvazvino zvichangoburwa 8 zvinowanika.
Kubva pane peji rekumba, tinya Baby Samples kuti uone zvese zviripo zvinopihwa izvo zvinosanganisira emahara manapukeni mukutsinhana kwekudzokorora pa Maonero uye imwe bhokisi kubva walmart mucheche mucheche yemahara moms vatsva.
Babycenter ndiyo yekuenda-kublog yezvinhu zvese zvine hukama nevana, kubva pakubata kusvika pakuchengeta vana vezera rechikoro.
Iyo saiti inoratidzira kuwanda kwezvishandiso zvinobatsira mamai anosanganisira ovulation macalculator uye vanowana mazita emwana, uye zvinonyanya kukosha, kupa.
Vashandisi vanofanirwa kunyoresa pawebhusaiti uye nekuisa ruzivo rwevana vavo kuti vavhure account.
Pane imwe nguva yakanyoreswa, pamusoro pemashandisi emahara, magwara uye maforamu enharaunda zviripo, vashandisi vanogashira zvinopihwa zvenguva dzose pane zvemahara uye zvakaderedzwa zvigadzirwa zvemwana nemwana.
Kuwana mahara emahara hakugone kuve nyore neTryspree, webhusaiti iyo inofanirwa kunge iri pane runyorwa rwaamai vese.
Isa ruzivo rwako pane peji rekunyoresa, kusanganisira saizi yako yezvokupfeka uye zuva rekuzvarwa, kuti uvhure yako yemahara Tryspree account.
Iwe unogona ipapo kutarisa saiti yacho nechikamu. Paunenge iwe wawana chigadzirwa chaunoda, ingobaya 'Tryspree it' bhatani uye voila, sampuro yako ichatumirwa kwauri; Iwe haufanire kunyange kushanyira imwe saiti kana kuzadza chero imwe ruzivo!
Pamusoro pezvigadzirwa zvevacheche, vashandisi vanogona kuwana mahara emhando yezvikafu, zvinwiwa, zvipfeko, uye zvimwe zvakawanda.
Kana iwe uchitsvaga mwana machira, iwe wauya kurudyi nzvimbo!
Zvakareruka uye zviri nyore, saiti iyi inopa madhiri makuru uye zvinonakidza zvigadzirwa zvitsva, pamwe nezvipo zvepamusoro zvepachena.
Ingo saina online kune account yemahara, uye wobva watarisa zvipo zvepachena zviripo zvinosanganisira manapukeni, kupukuta, uye zvinobatsira amai zvekushandisa, kusanganisira chikafu chekudya. Vacheche Booster kune vakadzi vane pamuviri.
Kuti uwane zvigadzirwa zvemahara, ingotinya pane chaunofarira wobva wadzvanya pane Get It Ikozvino bhatani. Iwo sampuli anobva atumirwa kwauri.
Iyo saiti zvakare inosanganisira coupon uye zvakachinjirwa kubatsira avo vane mashoma mabhajeti.
8. Anotungamira free
Guide2free isayiti inopa madhiri uye zvipo kubva kuAmazon uye mamwe akawanda epamusoro-mbiri e-commerce saiti.
Iyo saiti inoratidzira inobata chero chinhu kubva kune spa mazuva kusvika kune zvipfeko uye, chokwadika, zvinhu zvevacheche.
Kunyangwe ichibatsira, saiti yacho inogona kutora zvishoma kujaira uye inogona kunetsa pane dzimwe nguva, sezvo akawanda emahara anopa anoita, zvazviri, anoda kutenga, kubhadhara mari yekutumira, kana kunyorera kune kupihwa pane zvakati. senge pamwedzi nzvimbo dzekutenga.
Babiesonline inonakidza uye nyore kushandisa webhusaiti iyo inopa matipi uye kuraira kwevatsva uye vanotarisira vabereki.
Vanamai vanogona kuwana zvinyorwa zvakawanda zvinobatsira uye zvinonakidza chokwadi pane ino saiti uye vanogona kusangana nevamwe vabereki munzvimbo yakachengeteka uye inotsigira.
Kubva pane peji remba, tinya pane 'Mahara Yevacheche Zvinhu' mumenyu kuti uone zvese zvemahara zvigadzirwa uye coupon zviripo.
Zvipiriso zvinosanganisira yemahara fomura uye manapukoni makuponi uye mwana chikafu sampuli. Nehurombo, kunyoreswa neBabiesonline kunongowanikwa kune vashandisi mukati meUnited States.
Momma Wangu Akandidzidzisa kunounza zvipo uye zvipo kune yake webhusaiti uye zvemagariro midhiya.
Nyore kushandisa uye nezvakanyorwa zvakajeka zvikamu, Yangu Momma Yakandidzidzisa ine epamhepo madhiri, zvipo, uye makuponi, pamwe nezvidzidzo zvekudzidzisa, matipi, uye mabikirwo.
Kubva pane peji remba, tinya pane 'Maitiro ekuwana mahara zvinhu'; ipapo iwe uchaunzwa nezvazvino zvipo zviri kupihwa. Dzvanya pane kupihwa kwaunoda uye iwe uchazopihwa mirairidzo yekuti ungaiputira sei.
Nehurombo, hapana chekutsvaga sarudzo, saka iwe uchafanirwa kuve nemoyo murefu wekutsikisa kuburikidza nezvose zvinopihwa nenzira yavanoratidzwa.
Vashandisi vanogona zvakare kunyorera kune saiti kuti vagamuchire zvinopihwa neemail.
Makambani anotumira emahara evana sampuli
Kune akati wandei emakambani nemasangano anoshingairira kutarisa kutumira mahara emhando yezvigadzirwa zvavo kune vakabatikana moms; heano mamwe akanakisa:
gumi neimwe. Enfamil
Enfamil ndomumwe wevanotungamira vanogadzira zvigadzirwa zvevacheche kusanganisa fomula, mavitamini uye zvigadzirwa zvevanaamai mushure mekubata.
Vabereki vanogona kuwana mahara emhando yezvigadzirwa zveEnfamil nekunyoresa pane ino saiti Enfamil Mhuri Kutanga .
Kamwe kunyoreswa, coupons uye zvinopihwa zvinotumirwa kuemail kubhokisi rako rekunyora nguva nenguva.
Vatengi vanogona zvakare kukumbira yemahara sampuro yeEnfagrow Toddler Fomula kuburikidza ne fomu rekunyorera yakapusa kubva Enfamil.
12. Walmart mucheche Bhokisi
Unodikanwa naamai vane mashoma bhajeti, iyo Walmart Baby Bhokisi chirongwa chinowanikwa nekungonyorera kune yepamhepo rondedzero.
Zadza ruzivo rwako muakaunti yako uye Walmart inounza mabhokisi evana kumatanho ese matatu ebudiriro; prenatal, achangozvarwa uye mucheche.
Seizvo zita rinoratidzira, Honest Co inozvidzivirira pachayo yakajeka sevhisi. Vatengi vanosaina kusaiti uye vobva vasarudza bhokisi kana pasuru inosanganisira manapukeni, kupukuta, uye zvimwe.
Kunyangwe izvo zvigadzirwa zvinopihwa zviri zvemahara, vatengi vanoziviswa kuti vanofanirwa kubhadhara mari yekutumira.
Zita rinozivikanwa uye rakavimbika, iyo Target Yevacheche Registry inobvumira vabereki kuti vagadzire chishuwo chinyorwa chevacheche zvigadzirwa zvinogona kutengwa vega kana sezvipo nevamwe.
Kusainira registry kunopawo nhengo mukana wekupihwa zvakasarudzika, coupon, uye kukwidziridzwa.
gumi neshanu. Huggies
Huggies brand inozivikanwa pasi rese, hazvishamise kuti inzvimbo yakanaka yekutepfenyurwa uye madhiri.
Iyo Huggies Rewards scheme (inowanikwa seapp) inobvumira vatengi kuunganidza mapoinzi, kugamuchira madhora uye kurodha makuponi ekuchengetedza mari.
Nhengo dzinogashira mazana mashanu emapoinzi ekusaina, uye mapoinzi anogona kuregererwa munzvimbo dzakasiyana siyana, kusanganisira Pottery Barn.
Similac inozivikanwa inozivikanwa inogadzira fomula yevacheche uye neyakavimbika brand. Iyo Similac mibayiro chirongwa inosanganisira raffle yemikuru mibairo, pamwe nezvimwe zvinobatsira chaizvo zvipo zvemubairo.
Iyo Similac saiti zvakare inopa matipi uye kuraira kuna vanamai kubva pakubata kuburikidza kuenda kukireshi.
Kumbira sampuli yemwana fomula
Iwe unogona kuwana yemahara yevana fomula sampuli uye kunyangwe izere-saizi midziyo yemucheche wevana kubva kunzvimbo dzakaita seWalmart, pamwe nemakambani akaita Enfamil neSimilac. Kwete chete iwe unozochengeta mari, asi iwe unozogona kuyedza boka renyowani mutsva mafomula kuti uone kuti ndeupi mwana wako anofarira zvakanyanya.
Iwe unogona zvakare kubvunza chiremba wako, pamwe nechipatara kwaunonunura, kana vaine chero mafomula esampula kana kana ivo vachiziva nezve chero zviwanikwa kwaunogona kuwana imwe. Kana iwe uchikodzera, unogona zvakare kutarisa WIC (Vakadzi, Vacheche, Vana) kuti uone maitiro aungawana yemahara fomura.
Uye chekupedzisira, iwe unogona kuedza kubata makambani zvakananga kana kusaina pawebhusaiti yavo yemahara sampuli. Vanogona zvakare kukutumira iwe makuponi uye zvimwe zvidzikiso kuti utenge fomula zvishoma zvishoma kudhura.
Kumbira mahara emhando dzevacheche zvinhu
Kunyangwe iwe uchitsvaga emahara evana mishonga masampuli, mafomula, kupukuta, kana chero chimwe chinhu, une chokwadi chekuzviwana kana ukangozvitarisa. Nyoresa pamhepo nevako vaunofarira vagadziri, avo vanowanzo kukutumira yemahara sampuro kana maviri. Iwe unogona kutofonera kambani uye uvazivise kuti iwe unoda kuyedza chigadzirwa chavo uye kuti vangave vachida kukutumira iwe yemahara sampuro.
Iwe unogona zvakare kubvunza chiremba wevana vako kana kunyangwe chipatara kana vaine mahara sampuli, kunyanya kune izvo zvinhu zvavanokurudzira kuti ushandise. Semuenzaniso, vanogona kunge vachikupa masampula ekuderedza fivha kana imwe mishonga yekuyedza kana mwana wako asiri kunzwa mushe
Tsvaga macouponi ezvigadzirwa zvevana
PaInternet vana zvitoro zvinowanzo kuve nemakodhi ekuponi anowanikwa ayo anotendera iwe kuti ubvise mahara zvinhu zvevana. Dzimwe nguva chipo chemahara nekutenga, asi pese zvino uye zvinoyevedza koponi kodhi inozobuda ichikubvumidza iwe kuti uwane zvimwe zvemahara zvemwana zvinhu.
Kuti uwane makuponi, tarisa iyo Svondo pepanhau coupon inoisa uye chengeta ziso pamhepo coupon dzezvigadzirwa zvevana nezvimwe zvinhu zvaunoda. Uye kana uchinyatsoda kuenda mamaira ekuwedzera, funga kushandisa epamhepo coupon saiti pamwe nemaapplication ezvitoro zvako zvaunofarira. Vatengesi dzimwe nguva vanopa mahara $ 5 kana $ 10 kadhi rechipo nekutenga kwechinhu.
Mapurogiramu maviri makuru ekufunga nezvayo iBotta uye Checkout51, izvo zvinoita kuti zvive nyore kuwana makuponi uye mari-yekudzosera kupihwa pazvinhu zvawanga uchironga kutenga, semanapukeni kana mapukuta emvura. Iwe unogona zvakare kutarisa kuti ubatanidze coupon remugadziri neapp yekupa, dzimwe nguva zvichikonzera zvinhu zvemahara iwe kana mwana wako.
Edza nzvimbo dzeMusika
Iwe hauchade kumirira mwaka wekutengesa yadhi kuti uwane mahara evana zvinhu kubva kune vavakidzani vako. Semuenzaniso, Facebook Musika inokutendera kuti utarise yako yemuno nzvimbo yemahara yevana zvinhu. Shandisa sarudzo Ratidza chete mahara emahara kuona chete izvo zvemahara zvevacheche zvinhu zviripo.
Mahara ndeimwe nzvimbo iyo vanhu vanoisa zvinhu zvavasingachadi. Panzvimbo pekubata nedambudziko rekuitengesa, ivo vanongoda kuibvisa. Kune matani emahara emwana zvinhu akamirira iwe paFreecycle. Ungofanire kuenda undoiwana.
Iwe unogona zvakare kuwana emahara emwana zvinhu paCragslist kana iwe uchiziva kwekutarisa. Uye kana paine zvimwe zvinhu zvevacheche zvaunoda, asi hazvisi zvemahara, ingo tarisa pane izvo zvinyorwa. Kana chinhu chacho chave chiripo pane rondedzero kwechinguva uye chisiri kutengesa, bata mutengesi uye uone kana iwe ungangoda kuzvibvisa. Kazhinji yenguva, mutengesi anozoda kuitora zvakadaro kana chinhu chisiri kutengesa. Iwe haamboziva kusvikira iwe wabvunza!
Chekupedzisira, chenjera paunotora zvinhu zvemahara kubva kuvanhu vausingazive. Ita shuwa kuti unosangana munzvimbo yeruzhinji masikati uye kwete kuenda wega.
Kunyangwe vanhu vazhinji vakavimbika zvakakwana, haudi kutora mikana. Chengetedza kuchengetedzeka kumusoro kwepfungwa dzako nguva dzese. Uye, kana chimwe chinhu chisinganzwe zvakanaka, enda chete. Hazvina kukodzera kuisa panjodzi kuchengetedzwa kwako kuti uwane mahara zvekushandisa zvevana.
Iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti chirafu chakashandiswa, chinofamba-famba, uye zvimwe zvinhu zvevacheche zvinogona kuve nekurangarira kana kuvaka kwechinyakare. Zvakare, kusangoziva nhoroondo izere yechinhu kunogona kuita zvimwe zvinhu zvine njodzi kupfuura zvimwe. Ita tsvakurudzo yakawanda sezvinobvira kuti uve nechokwadi chekuti mwana wako akachengeteka. 8
Chengetedza Garage Kutengesa
Kupedza masikati garaji kutengeswa inzira yakanaka yekuwana isingadhuri uye dzimwe nguva yemahara yekupa kwevana, kunyanya kana iwe uri kutenga masikati masikati apo vanhu vanenge vapedza zuva racho. Kana vanhu vatengesa garaji, vanowanzo bvisa zvinhu zvavasingatengese kana kutengeswa kwegaraji kwapera.
Dzimwe nguva vanoburitsa gaba remarara rakaratidzirwa mahara. Kana, kana iwe uchida, bvunza kana iwe uchigona kuve usina kutengeswa zvinhu zvemucheche. Iwe unogona kushamisika pane zvese zvemahara zvemwana zvinhu zvaunogona kuwana kana iwe ukangobvunza. Semazuva ese, ita shuwa kuti zvinhu zvaunogamuchira zviri mumamiriro akanaka uye zvinogona kucheneswa zviri nyore. Iwe unofanirwa zvakare kutarisa kuti uve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvinosangana zvese zvekuchengetedza zviyero.
Isu tese tinoda kuchengetedza mari kana tichikwanisa, uye bhajeti haina kumbonyanya kukosha pane paunogamuchira mwana mutsva.
Hatigone kubatsira nekurara husiku, asi runyorwa rwedu rwezvipo uye nzvimbo dzekudzikisira dzinogona kubatsira kudzikisira mutoro.
3. Chipo amai (freeebiemom.com)
12.Walmart Bhokisi Remucheche
Emergency Medicaid Yevakadzi Vakazvitakura
Ndingaite sei kunyorera imba yehurumende
Mahara Makomputa evadzidzi